जहाँका पुरुषले दुईवटा विवाह नगरे जेल जानुपर्छ ! « Lokpath
जहाँका पुरुषले दुईवटा विवाह नगरे जेल जानुपर्छ !
काठमाडौं । हाम्रो देशमा बहुविवाह कानूनतः प्रतिबन्धित छ र एकभन्दा धेरै श्रीमती बनाउने पुरुषलाई सजाय पनि हुन्छ । तर अफ्रिकी देश इरिट्रियामा दुई जना महिलासँग विवाह नगरे सजाय मिल्ने कानून रहेको छ ।
इरिट्रियामा हरेक पुरुषले कम्तीमा २ जना महिलासँग विवाह गर्नैपर्दछ । इरिट्रियामा महिलाको तुलनामा पुरुषको जनसंख्या निकै कम छ ।
पुरुषलाई मात्र सजाय हुने होइन, महिलालाई पनि यदि पहिलो श्रीमतीको रुपमा विवाह गरेर भित्रिएका कुनैपनि महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई दोश्रो विवाह गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेमा त्यस्ता महिलालाई पनि सजाय हुने कुरा कानूनमा उल्लेख छ ।
श्रमिानलाई दोश्रो विवाह गर्नबाट रोक्ने महिलालाई जन्मकैदको सजाय हुनसक्ने प्रावधान कानूनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्याममा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: २०७६,फाल्गुन,४,आईतवार १२:१८